Nilefitra ny fanjakana : naato ny hetra ACD | NewsMada
Nilefitra ny fanjakana : naato ny hetra ACD
Nihemotra ny fanjakana! Niaraka nihaona tamin’ny mpanao gazety, omaly, ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, sy ny mpandraharaha tsy miankina. Nisy ny marimaritra niraisana teo amin’ny roa tonta, k a anisan’izany ny filazana fa “foana” ny fampiharana ny hetra Advance Cargo Declaration (ACD). Tinapaka fa hisy fifampidinihana ao anatin’ny roa volana, hamolavolana rafitra iray, hanomezana antoka sy fiarovana ny seranan-tsambo eto Madagasikara, sahanin’ny Antokondraharaha misahana ny seranan-tsambo sy ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy (APMF). Hatao ao anatin’ny mangarahara, tsy mitanila izany, ary tsy mivaona amin’ny fitsipiky ny varotra iraisam-pirenena, ka ao anatin’izany ny fepetra manokana samihafa.
Nanahirana ny Gem ny fanapahan-kevitra
Tsiahivina fa nanohitra ny fampiharana ny ACD ny Vondron’ny mpandrahara eto Madagasikara (Gem), ka nampihantona ny fikaondan-dohany amin’ny fanjakana. Amin’izao fiverenan’ny fifampidinihana izao, anisan’ny hojeren’ny roa tonta ny mikasika ny hetra TVA tsy noneran’ny fanjakana. Eo koa ny fanaraha-maso ny fomba fandoavan-ketra. Nilaza ny filohan’ny Gem, Rtoa Andriamamonjiarison Noro, fa nanahirana azy ireo ny ireo fanapahan-kevitra ireo, saingy tsy hiverenana intsony ary hita ankehitriny ny lalana hanatsarana izany. Miezaka ny sehatra tsy miankina manatsara ny fotodrafitrasa eny amin’ny seranan-tsambo.
Nomarihiny kosa fa tsy ny tsy fanoneran’ny fanjakana ny TVA no tsy mahafa-po azy ireo, fa ny fe-potoana hikarakarana ny antontan-taratasy. Toy ny orinasa afakaba, ohatra, misy antontan-taratasy nalefa tamin’ny taon-dasa, nefa tsy nanome valiny ny fanjakana hatramin’izao. Miteraka fatiantoka ho an’ny mpandraharaha anefa izany. Mazava rahateo ny voasoratra anatin’ny Tetibolam-panjakana 2016, fa tsy hisy intsony TVA tsy voaloa aorian’ny volana marsa.
Marihina fa miantoka ny 45%-n’ny Vokatra ao anatiny faobe (PIB) ny Gem, mitondra ny 47%-n’ny latsakemboka ara-tsosialy ary mampiditra ny 77%-n’ny hetra ho an’ny fanjakana.
Ho an’ny Ambatovy, nilaza ny minisitry ny Fitantanam-bola, Rakotoarimanana Gervais, fa efa misy ny fifampiraharahana eo amin’ny roa tonta. Eo ho eo amin’ny 10 andro eo no hamerenana ny kaontiny ahafahana manonitra ny volany. Mahatonga io fe-potoana io ny hanamarinan’ny Fitantanana ny hetra (DGI) ny anton-taratasy rehetra. Mitovy amin’izany koa ny orinasa hafa, fa tsy asiana tombo sy hala, saingy mety tsy hitovy ny fe-potoana fikarakarana azy.